Horudhac: Manchester City vs Arsenal… (Difaacdayaasha Premier League oo Etihad kusoo dhoweynaya Gunners oo gool dhalin la’ & Xaqiiqooyinka kahor kulanka maanta) – Gool FM
Horudhac: Manchester City vs Arsenal… (Difaacdayaasha Premier League oo Etihad kusoo dhoweynaya Gunners oo gool dhalin la’ & Xaqiiqooyinka kahor kulanka maanta)
Ahmed Nur August 28, 2021
(Manchester) 28Agoosto 2021. Waxaa maanta kulammada horyaalka Ingiriiska furaya ciyaarta u dhexeysa kooxaha Manchester City iyo Arsenal oo ka mid ah kulammada ugu xiisaha badan Premier League asbuucan xilli ay Arsenal wajaheyso halis ku aaddan inay guuldarreysato saddexda kulan ee ugu horreysa horyaalka maadaama ay wajahayaan koox ka mid ah kuwa loo saadaalinayo hanashada EPL.
Kooxda Macallin Pep Guardiola ayaa kulankii ugu dambeeyay 5-0 kusoo garaacday naadiga Norwich iyadoo uu ciyaartaas goolkiisii ugu horreeyay saxiixay Jack Grealish oo ah xiddiga ugu qaalisan Man City kaddib markii ay xagaagan 100 milyan oo gini kaga soo qaadatay Aston Villa.
Manchester City ayaanan heli doonin xiddigaheeda khadka dhexe ee Kevin De Bruyne iyo Phil Foden kuwaasoo dhaawacyo kasoo gaaray anqowga wali ku maqan.
Dhinaca kale, Arsenal ayaa la tacaaleysa dhibaatooyin dhaawac inkastoo qaar ka mid ah xiddigaheeda muhiimka ah ay soo laabanayaan, waxaana ka maqnaan doona Thomas Partey, Eddie Nketiah iyo Gabriel, balse waxaa soo laabanaya Hector Bellerin oo kasoo kabsaday dhaawac bowdada kasoo gaaray, Ben White oo kasoo kacay Korona Fayras isla markaana seegay labadii ciyaarood ee ugu dambeeyay Gunners.
Sidoo kale, waxaa dib usoo laabanaya Alex Runarsson iyo Willian oo kasoo kacay isla Korona, si la mid ah Kieran Tierney ayaa safka maanta kusoo laabanaya kaddib markii la nasiyay ciyaartii Carabao Cup ee ay Arsenal garaacday West Bromwich.
Manchester City ayaa guuldarro la’aan ah 11-kii ciyaarood ee ugu dambeeyay horyaalka oo ay la ciyaartay Arsenal iyadoo adkaatay sagaal jeer, halka labada kalena barbarro ay wada galeen.
Arsenal ayaa kulankiin sagaal oo xiriir ah ee Premier League ku wajahday Man City guuldarreysan karta, taasoo ka dhignaan doonta rikoorka kooxda guuldarrooyinka ugu badan ee xiriir ah horyaalka kagala kulanta hal naadi.
Naadiga lagu naaneyso Gunners ayaa dhalisay kaliya hal gool toddobadii ciyaarood ee ugu dambeysay ee ay Manchester City kaga hortagtay horyaalka, waana gool uu dhaliyay Laurent Koscielny ciyaar looga adkaaday Arsenal 3-1 oo dhacday February 2019.
Guuldarro maanta kasoo gaarta Arsenal ayaa Manchester City ka dhigi karta kooxdii ugu horreysay tan iyo Blackburn Rovers xilli ciyaareedkii 1995-96 ee iyadoo horyaalka difaacaneysa la garaaco labo ka mid ah saddexda kulan ee ugu horreysa Premier League.
City ma aysan guuldarreysan labo ka mid ah saddexda ciyaarood ee ugu horreeya Premier League tan iyo xilli ciyaareedkii 2004-05.
Kooxda Macallin Pep Guardiola ayaa labadii ciyaarood ee ugu dambeysay garoonkeeda ku adkaatay min 5-0, waxaana ay markii labaad sameyn kartaa inay ku adkaato 5-0 ama wax ka badan saddex ciyaarood oo is xiga oo ay horyalka Premier League kusoo ciyaartay kaddib 2017 ayay sidaas sameysay, kooxda keliya ee aanan ahayn Citizens sidaas sameysayna waa Chelsea sanadkii 2010.
Rigoorada xigta ee ay Manchester City dhaliso ayaa noqon doonta tii 100-aad ee ay ka dhaliso Premier League.
Arsenal ayaa guuldarreysan karta saddexda ciyaarood ee ugu horreysa Premier League markii ugu horreysay tan iyo kal ciyaareedkii 1954-55.
Gunners ayaa sugeysa goolkeedii ugu horreeyay ee Premier League xilli ciyaareedkan 2021-22, haddii ay maanta gool weysana waxay noqon doontaa markii saddexaad oo ay ku guuldarreysato inay gool dhaliso saddexda ciyaarood ee ugu horreysa horyaalka.
Nicolas Pepe ayaa dhaliyay afar ka mid ah shantii gool ee ugu dambeysay ee ay Arsenal ka dhaliso Premier League isagoo saxiixay saddexdii ugu dambeysay.
Bernd Leno ayaa safan doona kulankiisii 100-aad ee Premier League isagoo ka tirsan Arsenal, waxa uuna shabaqa difaacday 24 ka mid ah 99-ka ciyaarood ee hore, goolhayeyaasha kale ee Gunners u saftay 100 ciyaarood oo Premier League ah waxay dhammaantood heysteen ugu 38 shabaq-difaacasho marka ay gaarayeen darajadaas.
Van der Sar oo ka hadlay dareenkiisa kaddib markii uu dib ugu laabtay Cristiano Ronaldo kooxda Man United
Horudhac: Liverpool vs Chelsea... (Xiddig muhiim ah oo usoo laabanaya Liverpool, Azpilicueta oo rikoor weyn sameyn doona & Xaqiiqooyinka ciyaarta)